Instagram Ganacsi: Wax kasta oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato ▷ ➡️ Kuwa Raacaya ▷ ➡️
Instagram shirkadaha: wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato
December 19, 2018 0 comments 810
Astaantaadu ma ku leedahay barta Instagram? Maxaad sameyneysaa si aad u xoojiso sumaddaada halkaas? Weli miyaad ka fekereysaa sidii aad u wanaajin lahayd joogitaankaaga halkaas? Maanta waan arki doonnaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Shirkadda Instagram.
Kan hore waa kan hore. Sheekooyinka Instagram sida "Snapchat" waa kuwii ugu dambeeyay adduunka ee warbaahinta bulshada. Marka hore waxaan ka hadli doonnaa. Sidoo kale, waad isticmaali kartaa qaar codsiyada sawir.
Sheekooyinka 'Instagram' waxay tixraacaan taxane ah oo fiidiyowyo ah iyo sawirro ah oo lagudubi karo meel aan ahayn boggaaga caadiga ah. Sheekooyinkaasi way baaba'aan saacadaha 24 kadib. Dhanka kale, sheekada ayaa sii socota in loo soo bandhigo taariikh ahaan mar alla markii aad wax ku darto. Waxaa jira meel bannaan oo lagu tafatiro waxyaabaha aad ka kooban tahay iyada oo la adeegsanayo emojis madadaalo, rinjiyeynta farta iyo qoraalka. Fiidiyowyada iyo sawirrada ku jira feedhaan ma noqon karaan kuwa aad jeceshahay ama faallo ka bixin karto, laakiin waxaad farriin uga soo diri kartaa Sheekooyinka ku jira soo-bandhigidda isticmaalahaaga. Xitaa waad wadaagi kartaa qaybo ka mid ah sheekooyinka quudintaada caadiga ah. Adeegso Falanqaynta Instagram.
Haddaba su’aasha waa sida loo isticmaalo Instagram shirkadaha Ma u adeegsan kartaa hawshan inaad kor ugu qaaddo wacyiga shirkadda? Waxaan sahmi doonaa sida.
Sheekooyinka 'Instagram' waa hab wanaagsan oo lagu hubiyo balan qaad xagga internetka ah. Xayeysiiye caqli badan ayaa fahmi kara. Marka ugu horeysa, waxay noqon kartaa waddo weyn iyadoo la kaashanayo oo aad siin karto isticmaaleyaashaada aragti kooban oo ku saabsan waxa ka dambeeya masraxa. Ka hadal sheekooyinka dharka lagu duubo oo ma jiraan wax ka fiican inaad u sheegto qofka aad tahay, wixii ka baxsan waxyaabahaaga ama adeegyadaaga. U fiirso si ay u iftiimiyaan isbedelada soo socda ee boggaaga ama u soo bandhigo kooxdaada adigoo u sii maraya fiidiyowyo. Kuwani waa qaar ka mid ah qaabab aad u wanaagsan oo aad ku abuuri karto xamaasad oo aad u soo jiidan karto isticmaaleyaasha.
Sheekooyinka 'Instagram' waxay ku amaahiyaan xoogaa ka saarid ah waxyaabahaaga. Ka faa'ideyso waxyaabaha gaarka ah si aad u hesho dad badan oo raacsan madalkan. Intaa waxaa sii dheer sidoo kale waad awoodaa soo iibsato barta Instagram si loo sii xoojiyo astaantaada.
Algorithm Instagram: Waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Isbeddelka 'algorithm' ee dhowaan lagu soo bandhigay madal ayaa soo jiidatay dareenka shirkadaha B2C. Markii hore, dhejintaada ayaa ka muuqatay taariikh ahaan markay ku jiraan quudinta. Sikastaba, isbadelka kadib, Kaliya daabacadaha soo jiidan kara heerka ugu sareeya ee feejignaanta ama kaqeyb qaadashada qaababka jecel, faallooyinka iyo falalka ayaa ka muuqda meesha ugu sareysa. Wixii hadda ka dambeeya, Instagram waxay isku dayi doontaa inay cabbirto heerka dulsaarka ee daabacaaddu soo saari karto. Ka hadal Sirdoonka Artificial!
Shirkadaha, sida oo kale, waxaa looga baahan yahay inay dib-u-eegaan istiraatiijiyadooda warbaahinta bulshada sababta oo ah waxay iyagu doonayaan daabacaadihii ugu dambeeyay marka hore soo muuq. Haddii aysan sidaas sameynin, ma jirto wax micno ah oo la wadaago marka hore. Waa lagama maarmaan in laga jawaabo isbadelkan iyada oo si dhakhso leh wax looga qabtay. Weydiiso taageerayaashaada inay soo jeediyaan ogeysiiskaaga, ay isticmaalaan haashtaha quseeya si ay u soo jiitaan wadahadalada mowduucyadii ugu dambeeyay oo ay u xoojiyaan diiradda saareynta abuurista waxyaabo la wadaagi karo oo la gujin karo. Hubso inaad doorato aaladda suuq geynta saxda ah si aad u cabbirto guusha waxa aad wada leedihiin, gujiska, kobcinta dhagaystayaasha iyo dhajinta. Ha ka shakin inaad cabbirto waxkasta oo aad uga baahan tahay bartaada Instagram ee shirkadaha.
1 Sheekooyinka Instagram
2 Algorithm Instagram: Waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Xeerarka ugu fiican ee lagu dhejiyo bogga 'Instagram'
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka suuqgeynta 'Instagram'